Xildhibaan Ka tirsan M_Somaliland ayaa shalay u hanjabay Madaxweynaha Soomaaliya Kadibna Asagii sidii Ey oo kale loo garaacay!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Xildhibaan Ka tirsan M_Somaliland ayaa shalay u hanjabay Madaxweynaha Soomaaliya Kadibna Asagii sidii Ey oo kale loo garaacay!!
Xildhibaan Ka tirsan M_Somaliland ayaa shalay u hanjabay Madaxweynaha Soomaaliya Kadibna Asagii sidii Ey oo kale loo garaacay!!
Mar 04, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Daawo Muuqaal> Xasan Cawaale oo ka tirsan Xildhibaanada maamulka Somaliland, Kuwooda ugu Dhaqanka Xun ayaa Horey dhowr jeer lagaraacay, Asagoo ku kacay fal argagaxiso iyo Dhaqan Xumo uu ku sameeyay Madaxtooyada maamulka Somaliland, Sida uu ku Warbixinayo isagoo loola Cararay Dhakhtarka magaalada Hargeisa.
“Farmaajoow Itoobiya waa walaalaheen ee afka kala bax, hadii aadan meel joogin Waxaanu kuu galeeynaa sida Adeerkaa Afweyne [Siyaad Barre]. weynu ku laadi doonnaa”.
Xildhibaankaan oo ku suganaa aqalka Madaxtooyada Somaliland ayaa beerka laga garaacay, wuxuuna yiri isagoo isbitaal ku jira…
“waxaa leeygu dhuftay Feer aan waligeey arag, waxaa i garaacay taliyaha saldhiga madaxtooyda”.
Taageerayaasha Farmaajo miyaa Madaxtooyada Somaliland jooga?
Sidoo kale shalay ayaa isagoo Xaaladiisu aysan Caadi ahayn, wuxuu Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeisa, Wuxuuna Aflagaado u gaystay madaxwaynaha Soomaaliya, Sidoo kalana wuxu amaan kala dul dhacay Itoobiya, Isagoo markii ugu danbaysay uu isagu isku Qoslay Waalida dhaqanta ayaa siyaasada kusoo badanaysa.
Previous PostMadaxweynaha Turkiga ayaa walaac xoogan ka muujiyay Abaarta soo noqnoqotay ee ka jirta Dalkeenna Soomaaliya. Next PostCumar C/rashiid oo la sheegay inuu wax ka oogaa Heshiiska Imaaraadka ee Saldhiga Berbera!!